China API610 BB4 (RMD) Pump vagadziri uye vanotengesa | damei kingmech pombi
Kukura: 4-10 inches
Unyanzvi: 100-580 m3 / h
Kupisa: 0-210 ° C
1.Kubvisa casing, kuburitsa casing, diffuser, uye impeller: kabhoni simbi yechrome simbi.
2. Shaft, pfeka ringi uye diffuser gwenzi: chromic alum simbi ye chrome simbi.
1. Iwo mapombi ari echikamu casing, akawanda-danho centrifugal pombi. Iyo yekukweva casing, danho casing uye kuyerera casing zvakaomarara zvakasungwa pamwechete nemabhaudhi. Iwo majoini pakati peiyi casing anonyanya kusimbiswa nenzira yesimbi-simbi kusangana. Saizvozvowo, o-mhete anoshandiswa sezvisimbiso zvinobatsira.
2. Zvimedu zvakagadzirwa zvinoshandiswa kukweva, danho uye kuburitsa casings yerudzi MSHB yekumanikidza bhaira yekupa pombi.
1. Miseve yemapombi aya yakavharika nekupfava-kurongedza uye kutonhora mvura. Munharaunda yekuisa chisimbiso, iyo pombi shaft inodzivirirwa neyakagadziridzwa sleeve.
Mabheyaringi uye axial vakadengezera mudziyo
2. Gungano rinotenderera rinotsigirwa nekutsvedza mabheyaringi kumagumo ese epombi shaft. Mabheyaringi epombi akamanikidzwa-kugadzirwa. Iyo sisitimu yemafuta yakagadzirirwa mhando DG pombi. Iyo axial trust ye rotor osis yakaenzana neyakaenzana disc. Uye iyo yekusundira inotakura ndeye laso yakapihwa iyo yakapihwa kutakura residral axial simba inokonzerwa neshanduko yemamiriro ekushanda.
1. Iyo pombi inotyairwa nemota kuburikidza nekubatanidza. Iyo giya, membrane yekubatanidza uye hydraulic coupling inogona kushandiswa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi. Iyo pombi inogona kutyairwa ne turbine yemota.
2. Mafambiro anotenderera epombi ari kutenderera nguva painoonekwa kumucheto kwekutyaira.
3. Type Type MSH yakakwira yekumanikidza bhaira yekupa pombi inoshandiswa yekudzvinyirira yakanyanya bhaira yekupomba yakakwira yakamanikidza yakachena mvura.
Inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemvura suppy
Pashure: API610 BB3 (AMD) Pump
Zvadaro: API610 BB5 (DRM) Pump
API610 VS1 Pump VTD Muenzaniso
API610 OH1 Pump FMD Muenzaniso
API610 OH3 Pump GDS Muenzaniso